10 Kuhle Izindawo Ukuze Vakashela ENingizimu Italy | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 10 Kuhle Izindawo Ukuze Vakashela ENingizimu Italy
I sezulu efudumele akuyona phezu okwamanje. Sisekhona isikhathi futhi isizathu esihle uvakashele eNingizimu Italy kulenyanga! INingizimu Italy ineminikelo ethile emangalisayo. I Izindawo Kuhle ukuvakashela eNingizimu Italy zihlanganisa; elula amahle ugu okukhulu, lengqondo amabhishi ephelele, iziqhingi ezinhle zasogwini, kanye nenqwaba yamadolobha amakhulu kanye namadolobha. Kwakunzima unciphise uhlu lwethu phansi nje 10, kepha nansi i- 10 izindawo ezingcono uvakashele eNingizimu Italy.
1. I Amalfi Coast
Kuyini uhambo Italy ngaphandle ngokuvakashela Amalfi Coast? Le ndawo ikakhulukazi Southern Italy ingenye amahle kakhulu futhi lidume umhlaba wonke! Welulekela ukusuka eNaples ukuba Salerno, the Amalfi coast izipesheli kwenkundla okukhulu, langa amadolobha ukuthi wamsingatha ezintabeni, kanti ezinye izindawo zomlando ezithakazelisayo.
Le ndawo evikelwe izici amadolobha athile enhle ugu ezifana Amalfi, Erchie, Abancane, nasePositano - lawa madolobha anochungechunge lwezindlu ezinemibala ehlukahlukene ezibumbana emagqumeni futhi unikeze ngamathuba ezithombe aphelele.
Ngaphezu kwalokho, kumasayithi afana ne-Villa Rufolo e Ravello ukunikeza ukubukwa esingenakuqhathaniswa ngaphesheya koLwandle iMedithera.
Sorrento onabo bobabili Izinsiza yizivakashi eziduduzayo eyithola kanye zakudala esiyingqayizivele nangaphezulu ekupheleni ukudayiswa edolobheni elidala. A isikebhe ihamba kusukela lapha ukuze kwesiqhingi Capri, futhi kuba ukweqa omkhulu off phuzu yasePompeii. Nokho, ISorrento yaziwa nangayo kakhulu gourmet cuisine, emangalisa eweni zokuhlala (Nokho akukho amabhishi), futhi ukubukwa emangalisa ayakhiwe ngaphansi kweNtaba iVesuvius.
Bologna ukuze Pompei Izitimela
Lokhu edolobheni medieval ibekwe eduze iphahlazeke ogwini olunamadwala yoLwandle LwaseMedithera. Itheku lawo ritzy ingenye ezidonsela phezulu e-Italy. Uma ufuna ukuhlala lapha ngesikhathi sasehlobo kungase kudingeke ukubhuka kahle kusengaphambili ukuze uvikele ehhotela olikhethile njengoba amakamelo ezifinyelela FAST. Njengoba sisondela ekupheleni kwesizini efudumele, ungahle ube inhlanhla nge ngomzuzu wokugcina ukubhuka!
Ezinye umlando cool, Paestum Iyidolobhana emhlabathini Italy, kodwa yasungulwa amaGreki asendulo, beseseGibithe besendlini ukulawula le ngxenye ye-Italy! Khona-ke wayaziwa njengomuntu Poseidonia unkulunkulu kolwandle.
I kwezakhiwo zaseGrisi wedwa kuwufanele ukuvakashelwa ngakho qiniseka ukubeka ukuthi zibe uhambo lwakho ngaphezu ngokuvakashela walondoloza kahle amathempeli amathathu lesiGreki une ukubona. Imibhalo emidala kunayo yonke yakhiwa cishe 550BC (ukunikeza noma ukuthatha unyaka) futhi Nethempeli Hera okuyinto emangalisayo.
5. Kuhle Izindawo Ukuze Vakashela ENingizimu Italy: Naples
Naples, noma Napoli, kuxhomeke kulokho ulimi, ngumuzi ngobukhulu e-Italy. Ngokuthembakala, kukhona ezinye ukubukwa ephikisayo kakhulu kule ngxenye yeNingizimu Italy. Kwabanye, likhulu, amahlazo, kugcwele ubugebengu, nokuwa, kwabanye kuba basukelane futhi asemkhathini. Kungakhathaliseki ashaye izinwele zakho emuva, thina ukuqagela? Yinye into eqinisekile nokho. Lokhu edolobheni elingasogwini Wik unobuntu yayo!
abaningi kudla lengikutsandzako Italian eladabuka Naples nendawo ezungezile yayo ezindaweni ezifana pizza, futhi spaghetti. Lezi izitsha zithathwa lapha sina futhi ngokuvamile okubonisa fresh, izithako otshalwa. izivakashi eNaples zibandakanya omkhulu inqaba ephakathi, New Castle, kanye inqaba Ogwini lolwandle of Castel del Ovo. Idolobha nalo liseduze neVesuvius, kuphela mlilo ezwekazini laseYurophu.
6. Kuhle Izindawo Ukuze Vakashela ENingizimu Italy: Alberobello
Idolobhana Alberobello uhlukile ukuthi isibonelo esihle kunazo zonke walondoloza Trulli izakhiwo okutholakala lonke elase-Italy (kahle, ngakho Ngatshelwa).
Emakhaya yakhiwa kuleli isitayela Trulli zenziwa nge oyindilinga uphahla itshe ngaphandle kokusebenzisa nosimende (Nokho, Nami ngingeyona Umakhi ngakho musa ucaphune kimi ngalolo). Imizi endala isukela ekhulwini le-14 kanye ngokuphelele emangalisa, ukuyenza ibe ngeyodwa yokufanele ibonwe futhi lamadolobha amahle e-Italy Southern ukuvakashela.
Naples ukuze Monopoli Izitimela
7. Kuhle Izindawo Ukuze Vakashela ENingizimu Italy: Tropea
Bheka, I khuza you kusengaphambili. Maningi amathuba isithombe kule ndawo kukhona uyahlanya. Qaphela ukuthi awazi uphuthelwe into yangempela! I idolobha elihle lasendulo weTropea uqobeke phezu kwamanye amawa angaphezulu nangaphesheya komgwaqo ukusuka ku ewumngcingo sandy beach, it is kuthiwa eyasungulwa Hercules yena.
Uma indawo, kukhona ezimbili langa amasonto e Tropea kakhulu, Santa Maria del Isola kuyinto esontweni medieval elalakhiwe esiqhingini nakuba neminyaka siltation kuholele ibhuloho umhlaba ukwakha phakathi kulesi siqhingi ezwekazini. Kanti omunye lombhishobhi; it has amabhomu amabili unexploded yangekhulu WW2 Uhlezi ngaphandle nje umnyango wesonto. Abantu bendawo babekholelwa lesi sakhiwo ivikelwe ongumvikeli ngakho bayaziqaphela izinyathelo zakho!
Amasonto ewodwa angenza lokhu elinye lamadolobha amahle kakhulu e-Southern Italy. Uzongithanda it!
Vibo Marina ukuze Tropea Izitimela
Catanzaro ukuze Tropea Izitimela
Cosenza ukuze Tropea Izitimela
Lamezia Terme ukuze Tropea Izitimela
8. Kuhle Izindawo Ukuze Vakashela ENingizimu Italy: Capri
Ngokomthetho esiqhingini esincane, Capri has a edolobheni langa futhi marina ukuthi une ukuhlola. Sonke lesi siqhingi kuyinto ocebile emlandweni futhi izinganekwane futhi omunye ndawo enhle kangaka kufanele uvakashele lapho esifundeni.
Uma ufuna izinto ukubona, Umuzi UMbusi WamaRoma uTiberiyu (Villa Jovis) namanje omunye izindawo ezinkulu ukubona esiqhingini kanjalo futhi Blue sivale indlela engena emgedeni. Emhumeni chibi kuphela kufinyeleleke ngesikebhe futhi kuphela uma kukhona evumayo tide (ngakho alungele nokukhansela).
9. Kuhle Izindawo Ukuze Vakashela ENingizimu Italy: YasePompeii naseHerculaneum
yasePompeii nelaseHerculaneum babe amadolobha amabili angamaRoma futhi ezigodini abangu aqedwe lapho iNtaba iVesuvius kwabheduka yonke indlela emuva 79 AD.
Mhlawumbe edume kakhulu amabili edolobheni yasePompeii, okuyinto ungakwazi manje sizulazule futhi uhlole lapho ukhona kule ndawo. Kuvele awful 3,000 abantu ababhubha edolobheni, kodwa umlotha oshisayo immortalized emanxiweni ku yilokho eyikho namuhla. Be waxwayisa, ke ungathola kuhle matasa lapha, ngakho hlelani ngokufanele futhi khumbula ongase ube kulayini ithikithi ukungena.
Oh, futhi edolobheni eliseduze naseHerculaneum lincane futhi kwaba wesifunda acebile futhi unikeza isibonelo sokuthi ukuthi amaRoma abacebile bebahlala. Qiniseka ukuthi uvakashela i-naseHerculaneum Archaeological Area uma buff umlando!
Salerno ukuze yasePompeii Izitimela
Bari ukuze Pompei Izitimela
10. Kuhle Izindawo Ukuze Vakashela ENingizimu Italy: aeolian Islands
Kugcine kuhla lwethu of Best Izindawo ukuba uvakashele eNingizimu Italy. I aeolian Islands! Baziwa ngokuthi Hawaii-Italy. Kuyinto yezinhlamvu iziqhingi enyakatho Sicily, futhi Kuwubuwula langa. Njengobe kumangalisa njengoba kungase, neze ubani uyazi ngakho. Kodwa ones aqhubeka eza emuva. Yingoba bayazi Bayokwazi endaweni zonke ukuba ngokwabo.
Ukuqasha Scooters-zip amabhishi emhlabeni amahle abamnyama. Sunset aperitivo e Pollara. Ukuhamba emhlabeni eziqhingini ezizungezile of Stromboli, Panarea, futhi Lipari. Ukuthola njengoba kushisa kule ndawo ngamanzi sulphur Spas in ivolkano. Igama lesiGreki vibes (Akumangazi - iziqhingi abizwa i Aeolus, unkulunkulu imimoya, Njengoba izakhamuzi Greek). Salt kwaluqeda izindlu bechitha phansi ogwini. Futhi ukuzizwa sengathi wena ku enkulu imfihlo ukuthi isabelo wanna kuphela nabantu obathandayo!
Ngaphakathi ithiphu: ukuhamba lapha phakathi Easter-Okthoba futhi Book kusengaphambili uma ufuna ukuvakashela ngo-August!
Ukulungele ukupakisha izikhwama zakho ohambweni lwaseNingizimu ne-Italy? Khona-ke ukubhuka ithikithi lakho Isitimela Londoloza Isitimela kungakapheli imizuzu. Ayikho imali eyengeziwe, kungekho mpikiswano idalwa yini, nje fun!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “10 Kuhle Izindawo Ukuze Vakashela ENingizimu Italy” ungene kusayithi lakho? ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-places-visit-south-italy%2F%3Flang%3Dzu- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#ithole #ISouthItaly #I-SummerinItaly #TrainTravelItaly ukulele uhambo ngesitimela